लगातार घट्दै डलरको भाउ, आज एकैदिन रु. १.१७ को गिरावट
काठमाण्डौ। अमेरिकी डलरको भाउमा लगातार तीन दिनदेखि गिरवाट आइरहेको छ। आज शुक्रबार पनि डलरको भाउ १.१७ रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि शुक्रबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ हिजो बिहीबार तुलनामा १.१७ रुपैयाँले घटेको हो। शुक्रबारको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर ११९.९५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२०.५५...
सर्वाधिक उचाइमा पुगेको डलरको भाउ १ मोहरले घट्यो
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउ बुधबार एक मोहरले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बुधबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ हिजो मंगलबारको तुलनामा ५१ पैसाले घटेको हो। आजको विनियम दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२१.२३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२१.८३ रुपैयाँमा झरेको छ। हिजो मंगलबारको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२१.७४...
डलरको भाउमा उछाल, नेपालकै इतिहासमा सर्वाधिक उचाइमा
काठमाण्डौ । नेपालकै इतिहासमा अमेरिकी डलरको भाउ शुक्रबार हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोनाभाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र खस्किएको बेला डलर विनिमय दरले उचाइ चुमेको हो। डरल बलियो बन्दा नेपाली रुपैयाँ झनै कमजोर बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरअनुसार...
डलरको भाउ फेरि उचाइमा, आजको विनिमय दर कति ?
काठमाण्डौ । नेपालकै इतिहासमा अमेरिकी डलरको भाउले मंगलबार दोस्रो उच्च विनिमय दरको रेकर्ड बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर ११८.५४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११९.१४ रुपैयाँ कायम भएको हो। नेपालमा डलरको विनिमय दर यो अहिलेसम्मकै दोस्रो उच्च हो। यसअघि सन् २०१८ अक्टोबर १०...
दुई दिनमै ३ ‘सुका’ ले घट्यो डलरको भाउ
काठमाण्डौ । पछिल्लो दुई दिनमा अमेरिकी डलरको विनियम दर झन्डै ३ सुकाले घटेको छ। हिजो आइतबार र आज सोमबार गरी प्रतिडलर विनिमय दर ७३ पैसाले घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्राको विनियम दरअनुसार १ डलरको खरिददर ११७.७१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११८.३१ रुपैयाँ कायम गरेको छ। हिजो आइतबार १ डलरको खरिददर ११७.९८ र...
डलरको भाउ आज ह्वात्तै बढ्यो, १६ महिनायताकै उच्च
काठमाण्डौ । नेपालको इतिहासमै अमेरिकी डलरको भाउले शुक्रबार दोस्रो उच्च विनिमय दरको रेकर्ड बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि अमेरिकी डलरको खदिदर प्रतिडलर ११८.४४ रुपैयाँ र बिक्रीदर प्रतिडलर ११९.०४ रुपैयाँ तोकेको छ। जुन अहिलेसम्मकै दोस्रो उच्च विनिमय दर हो। यसअघि सन् २०१८ अक्टोर १० तारिखमा नेपालमा अमेरिकी डलरको खरिददर...
आज डलरको भाउ खस्कियो, विनिमय दर कति?
काठमाण्डौ । केही दिनयता नेपाली मुद्राको तुलनामा बलियो बन्दै गरेको अमेरिकी डरलको भाउ बिहीबार भने खस्किएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार लागि अमेरिकी डलरको खरिददर प्रतिडलर ११७.५२ र बिक्रीदर प्रतिडलर ११८.१२ रुपैयाँ तोकेको छ। हिजोको तुलनामा डलरको भाउ ७८ पैसा खस्किएको हो। हिजो बुधबार खरिददर प्रतिडलर ११८.३० रुपैयाँ र बिक्रीदर...
कोरोना असर; अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर बन्दै नेपाली मुद्रा
काठमाण्डौ । महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको त्रास विश्व अर्थतन्त्र खस्किएको बेला अमेरिकी डरल बलियो बन्दै गएको छ भने नेपाली रुपैयाँ झनै कमजोर बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि अमेरिकी डलरको खरिद दर प्रतिडलर ११८.२४ रुपैयाँ र बिक्रीदर प्रतिडलर ११८.८४ रुपैयाँ तोकेको छ। यो यस वर्षकै उच्च हो। हिजो सोमबार अमेरिकी...
अमेरिकी डलरको भाउ थप उचाइमा
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको विनिमय दर आज शुक्रबार बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलरबराबर खरिद दर ११७.०१ र बिक्री दर ११७.६१ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यो विनिमय दर नेपाली बजारमा हालसम्मकै दोस्रो उच्च हो। यसअघि सन् २०१८ अक्टोबर १० मा १ डलरको खरिद दर ११८.७३ रुपैयाँ र बिक्री दर ११९.३३...
अमेरिकी डलरको पारो तात्दै, विनिमय दरले उचाइ चुम्दै
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउ (विनिमय दर) आज बुधबार पनि बढेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वका थुप्रै मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि अमेरिकी अर्थतन्त्र सबल बनेपछि अमेरिकी डलरको भाउ दिनदिनै उचाइमा पुगिरहेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलरबराबर खरिद दर ११६.९८...
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलन १९.२ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २० प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक २०७५/७६ को वार्षिक आर्थिक गतिविधि समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन, २०७० अनुसार तयार पारिएको प्रतिवेदन उपत्यकासहित ५७ जिल्लामा गरिएको स्थलगत...
डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठको निलम्बन फुकुवा, सरकारका प्रवक्ता भन्छन्-‘छानबिनमा केही भेटिएन’
काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । निलम्बन फुकुवासँगै श्रेष्ठ पुनर्बहाली हुनेछन् । आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि करिब एक महिनाअघि डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले श्रेष्ठको निलम्बन फुकुवा गर्ने...
राष्ट्रबैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन : आम्दानीको अधिकतम ५०%सम्म ऋण देऊ
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सीमा निधारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मंगलबार निर्देशन दिएको हो । आवधिक, घर तथा...
काठमाण्डौ । लामो समयसम्म नेपाली कामदार मलेशिया जान नपाउनु र विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले अनौपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने क्रम बढ्नुले पछिल्ला महिनाहरूमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा कमी आएको हुनसक्ने आशङ्का विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। तर यसबारे थप स्पष्ट हुन र मुलुकको ढुकुटीमा रेमिट्यान्सको योगदान कम हुँदै जाने जोखिम कम गर्न...
काठमाण्डौ । एक हजार दरका नक्कली नोटको कारोवार गर्ने चारजना बङ्गलादेशी नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिको टोलीले उनीहरुलाई आज पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा बङ्गलादेश नेत्रकुना घर भई मध्यपुरथिमि–१ लोकन्थली बस्ने ४१ वर्षीय अलि अहमद, २१ वर्षीय रोबेल मिक्दा र २१ वर्षीय महमद उल्लाहा रहेका छन् । त्यस्तै...